News Tagged "ဗဟုသုတနှင့်အသိပညာ" - ULLER
အမျိုးအစားအားလုံး လေ့ကျင့်ရေး Entretenimiento လူထု အသိပညာ သဘောထားတွေ ခရီးသွားခြင်းနှင့်နေရာများ
ဇွန်လ 02, 2021
စည်းမျဉ်းမရှိဘဲအားကစား? ကောင်းပြီ ... လွတ်လပ်မှုအချို့ရှိနိုင်သည် နှင်းလျှောစီး Freerideသို့သော်လွတ်လပ်မှုပိုများလေ၊ တာ ၀ န်ပိုကြီးသည်ကိုသတိရပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဆောင်းပါးတွင်သင်ပေးသောအကြံဥာဏ်များကိုလိုက်နာပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အသန့်ရှင်းဆုံးသောတောင်ပေါ်တွင်ပျော်မွေ့ပါ။
မင်းအရင်ကကြားဖူးလား အမြင့်နေမကောင်း? ဤသည်မှာနှုတ်အားဖြင့်ပြောသောနာမတော်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြင့် ၂၄၀၀ မီတာအထက်တွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရသောရောဂါလက္ခဏာများကိုလက်ခံရရှိသည်။ ကောင်းတာက upload မလုပ်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုရှောင်နိုင်တာပါ montana။ ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာမင်းတို့သိသင့်တဲ့အရာအားလုံးကိုငါတို့သင်ပေးတယ်။
Enduro MTB စက်ဘီးစီးခြင်း၌စတင်ရန်သိကောင်းစရာများ
မေလ 24, 2021
စကားလုံးဘယ်ကနေလာတယ်ဆိုတာသိလား အန်ဒူရို? ခံနိုင်ရည်ကိုဆိုလိုသည်။ ဒါကဒီပုံစံပါပဲ MBTခံနိုင်ရည်၊ အမြန်နှုန်းနှင့်လွတ်လပ်မှုလည်းလိုအပ်သည်။ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးမှာမင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပ်နှံဖို့စဉ်းစားနေရင်သိသင့်သိထိုက်တာတွေကိုသင်ပေးတယ် enduro စက်ဘီးစီး MBTတောင်တက်ခြင်း၏အစွန်းရောက်ဆုံးနှင့်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
မေလ 12, 2021
စိန်ခေါ်မှုများနှင့်လူသား၏၎င်းတို့ကိုကျော်လွှားနိုင်စွမ်း။ ၁၇ နာရီအောက်၊ ပြေး၊ ရေကူးခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးခြင်းအကြား ၂၂၆ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ စူပါလူသားတွေရှိတယ်၊ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့စ်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်တွေပါ။ ငါတို့ကို Ironman အကြောင်းသင်ကြားပေးတယ်။ ဒီပြိုင်ဆိုင်မှုကသင့်ကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်စေတယ်၊ ​​အပြင်းထန်ဆုံးဆားကစ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသင်တစ်ခုထဲလုပ်ရန်ဝံ့ဝံ့လိမ့်မည်။ ?
rest ၀ ရက်တောင်စခန်းသို့သွားရန်စက်ဘီးနှင့်ဗီဒီယိုကင်မရာ။
မေလ 06, 2021
စက်ဘီးဖြင့် Base ၀ ရတ်တောင်ခြေစခန်းကိုတက်။ မရနိုင်ပါ။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကရူးသွပ်နေသလိုပဲ၊ ဟုတ်တယ်၊ ဒီဟာကအီတလီစက်ဘီးစီးသူ Omar Di Felice ရဲ့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးပိုကောင်းတဲ့ထိတွေ့မှုပေးဖို့ပါ။ သူယူခဲ့နင်းလေဖြတ်မှတ်တမ်းတင်။
သင်၏စိတ်ကို run ရန်လေ့ကျင့်ပါ
မေလ 05, 2021
မင်းရဲ့ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုအဆုံးသတ်တော့မယ့်နေရာသင့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအဲဒီအသံလေးကိုအသံတိတ်နေသလိုခံစားရတယ်။ ဘယ်နေရာမှမရပ်ချင်ဘူး၊ နင့်ကိုမောနေပြီလို့ခံစားရပြီးရုတ်တရက်တောင့်တင်းလာတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကထင်ရသလိုပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲ။ သင်၏အသံနှင့်အသံကိုနှုတ်ပိတ်ရန်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ရန်စီမံသောအားကစားသမားများ၏လှည့်ကွက်အချို့ကိုသင်၏ရုပ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းဖြစ်စေရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။
အားကစားသမားကောင်းတိုင်းသည်မျက်လုံးများနှင့်နေရောင်ခြည်ဒဏ်မှကာကွယ်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့၏အခြေခံပစ္စည်းကိရိယာများတွင်အားကစားမျက်မှန်များထည့်သင့်သည်။ သို့သော်အားကစားနေကာမျက်မှန်သည်၎င်းတို့ထက်များစွာပိုမိုပါသည်။ ဖက်ရှင်၊ အကာအကွယ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သည်။ အားကစားနေကာမျက်မှန်တပ်ထားခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
Windsurfing အကြောင်းသင်မသိသောအရာ (၁၀) ခုကိုရှာဖွေပါ။
ဧပြီလ 13, 2021
Windsurfing ဟာသင်ရှာဖွေချင်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်သိချင်စိတ်များပြည့်ဝသောအားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ပြီးဒီသင်ခန်းစာရဲ့ဘိုးဘေးတွေအကြောင်း၊ Windsurfing ကိုကြိုက်ရင်သင်မမြင်နိုင်တဲ့အစက်အပြောက်တွေအကြောင်းပြောပြပါလိမ့်မယ်။
အပြင်ပိုင်းအားကစား၏ထူးခြားသောအကျိုးကျေးဇူးများ နွေ ဦး Edition ကို
ဧပြီလ 05, 2021
သင်၏အားကစားသည်ယခုအချိန်တွင်သင်၏အသက်တာ၌ပြောင်းလဲနေပြီးသင်၏အလေ့အကျင့်စာရင်းတွင်မပါဝင်ရသေးပါကနွေ ဦး သည်ခုန်ပျံကျော်လွှားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤတွင်ပြင်ပအားကစား၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကိုလက်မလွှတ်ပါနဲ့
Tour de France အကြောင်းသိထားသင့်သည့်အချက် ၁၀ ချက်
မတ်လ 29, 2021
Tour de France အကြောင်းတစ်ခါမှမကြားဖူးသေးပေမယ့် ... သငျသညျအကွောငျးကိုအားလုံးအရာအားလုံးကိုသိထင်ပါသလား ဒီဒဏ္legာရီအားကစားဖြစ်ရပ်? ဤမယုံကြည်နိုင်လောက်သောပြိုင်ဆိုင်မှုကိုသိရန်သင်လိုအပ်သည့်အရာ ၁၀ ခုကိုဖတ်။ ရှာဖွေပါ - အခြေခံအကျဆုံးနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်မှ - သမိုင်း ၀ င်ဆုံးအချက်အလက်များအထိ!
အကယ်၍ သင်လမ်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တောင်ပေါ်သို့သင်၏နောက်လမ်းကြောင်းအတွက်စက်ဘီးမျက်မှန်ကို ၀ ယ်ရန်စဉ်းစားနေပါကကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအားစျေးဝယ်လှည်းသို့မထည့်မီသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့်အရာများနှင့်Uller®၏လဲလှယ်နိုင်သောမှန်ဘီလူးများသည် အလွန်ဆွဲဆောင်မှု option ကို။
သမိုင်း၌ဆင်းသွားကြပြီသူကို7စပိန်အားကစားသမား
မတ်လ 15, 2021
ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အားအားကစားလောကတွင်ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ စပိန်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားအဆင့်သည်စပိန်အားကစားသမားများသည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့သည့်မတူညီသောစည်းမျဉ်းများတွင်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ပြိုင်ပွဲများ၊ တောင်တက်ခြင်း၊ စပိန်လူမျိုးများမှ၎င်းတို့ကိုယုံကြည်ရုံသာမကစပိန်တွင်အကောင်းဆုံးအဖြစ်သမိုင်းတွင်ဆင်းသက်လာသောစပိန်လူမျိုးများ၏ပုံပြင်များကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်ခြင်း။ ဤတွင်သင့်အားသူတို့၏မယုံနိုင်လောက်အောင်မှတ်တမ်းနှင့်အားကစားအပေါ်စိတ်အားထက်သန်မှုအတွက်သမိုင်းတွင်ကျဆင်းသွားခဲ့သည့်စပိန်အားကစားသမားများ၏စာရင်းကိုသင်တို့၌ထားရှိသည်။
စက်ဘီးစီးခြင်း၏5ချက်ချင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေပါ!
စက်ဘီးစီးတာသေချာတာပေါ့။ စပိန်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာရှိအလှပဆုံးရှုခင်းအချို့ကိုသင်ဖြတ်သန်းသွားစဉ်သင်၏မျက်နှာ၌လေပြေတိုက်ခတ်နေသည်ကိုခံစားကြည့်ပါ။ စက်ဘီးစီးခြင်းလောကတွင်သင်စတင်သောအခါသင်ရရှိသောအဓိကအကျိုးကျေးဇူးငါးခုမှာဘာလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ဖတ်ရှု။ ဆက်လက်ရှာဖွေပါ။
နောက်ဆုံးပေါ်နှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်ကာမျက်မှန်တပ်ပြီး Uller Snowdirft အသစ်ကိုရှာဖွေပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှု ULLER SNOWDRIFT®နှင်းလျှောစီးအကာများ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအော့ပ်စက်များတွင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ငါ၎င်းတို့တွင်သံလိုက်မှန်ဘီလူးလဲလှယ်ရေးစနစ်ပါဝင်သည်။ ငါတို့နည်းပညာသိလား ဒီမှာသူတို့ကိုရှာဖွေပါ။
ကျနော်တို့ polarized မျက်မှန်နှင့်ပတ်သက်။ အများဆုံးမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများကိုဖြေရှင်း!
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2021
Uller®မှကျွန်ုပ်တို့၏နေကာမျက်မှန်များသည်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုတိတိကျကျရှင်းပြရန်လိုသည်။ ဤ Polarized နေကာမျက်မှန်အမျိုးအစားများသည်မည်သည့်အားသာချက်များနှင့်သင်တို့၏အရိပ်လက္ခဏာများနှင့်အညီသင်ရွေးချယ်သင့်သည်တို့ကိုလည်းရှင်းပြပါမည်။ သံသယများနှင့်အတူမနေပါနဲ့, ဒီမှာကျနော်တို့ polarized နေကာမျက်မှန်နှင့်ပတ်သက်။ အများဆုံးမကြာခဏမေးခွန်းများကိုဖြေပါ!
Uller မှ®နှင်းလျှောစီးနှင်း၊ နှင်းလျှောစီးအားကစား၊ freeride သို့မဟုတ်အခြားပြင်ပအားကစားလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်နေစဉ်သင်၏အမြင်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက် Photochromic မှန်ဘီလူးများဖြင့်နှင်းလျှောစီးမျက်နှာဖုံးများ၏အရေးကြီးပုံကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသရန်လိုသည်။ Photochromic မှန်ဘီလူးများဖြင့်နှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်တပ်ဆင်ခြင်း၏အားသာချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
Uller မှ®ကျွန်ုပ်တို့ကမြင်းစီးသူရဲများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားများအနေဖြင့်မည်သည့်အန္တရာယ်အမျိုးအစားကိုမဆိုရှောင်ကြဉ်။ သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုများအားဆက်လက်ပျော်မွေ့စေလိုသောကြောင့်တောင်များ၌မည်သည့်အန္တရာယ်မဆိုကာကွယ်ခြင်းအတွက်ဤအကြံပြုချက်များကိုပြင်ဆင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ တောင်များ၌သင်၏စွန့်စားမှုအတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပါ။
အကောင်းဆုံးအားကစားပွဲများသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ပြန်လာခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 29, 2020
အာရုံစိုက်အားကစားသမား! The အားကစားပွဲများ သင်ဘာကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့တာလဲသူတို့က ၂၀၂၁ အတွက်သူတို့ရဲ့ပွဲကျင်းပတဲ့ရက်ပြီးပြီ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အားကစားနှင့်စွန့်စားခန်းများပြည့်နှက်နေသောတစ်နှစ်ပြည့်တော့မည်။ ပြက္ခဒိန်ပေါ်ရှိ၎င်းတို့၏ protocol အသစ်နှင့်ရက်စွဲကိုအတည်ပြုပြီးသောဖြစ်ရပ်များစာရင်းကိုကြည့်ပါ။
12အောက်ပါ